ဗိုက်ခေါက်ထူ/ဗိုက်ပူလို့ အလှပျက်နေသူများအတွက်By TRIVIA – January 3, 2012Posted in: Beauty, Health ဒီပိုစ့်လေးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ရတာပါ။ ရွှေဗြူးတီး မှ အန်တီ မမ ညီမလေးများအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ထပ်မံ မျှဝေလိုက်ပါတယ်…
သံပုရာသီး တစ်လုံးရဲ့ ၅ ပုံ တစ်ပုံလောက်ကို လှီးပြီး… အကြမ်းပန်းကန်လုံးထဲကို အရည်ညှစ်ပါ…
အကြမ်းပန်းကန်လုံးထဲသို့ အုံးဆီ သုံးလေးစက်လောက် ထည့်ပေးပါ… ထို့နောက် …. ဂဠုန်ရာဇာ/မိဂသီ/ရှမ်းရိုးမ/လင်
ဇီး(လိမ်းထေည့်ဆး)တစ် မျိုးမျိုးကို တစ်ခါလိမ်းစာ အနေတော်ထည့်ပြီး… မွှေပေးပါ…
တစ်ပါတ်အတွင်း သိသာစွာ… ဗိုက်ချပ်လာသည်ကို… လက်တွေ့… တွေ့မြင် ခံစားရမှာပါ…(ယခုမိတ်ဆွေ.. ၃ /၄ ယောက်လောက်မှ လက်တွေ့ လိမ်းနေပြီး… ကျေးဇူးတင်ကြောင်း… ထောက်ခံချက်ပေးလာသောကြောင့်… သူငယ်ချင်းတို့ကို မျှဝေလိုက် ပါတယ်)
မှတ်ချက်- ညစာကို ပုံမှန် ထက်… လျှော့စားပေးရင်… ပိုပြီး သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်စေပါတယ်…တစ်ပါတ်အတွင်း သိသိသာသာ အဆီနှင့် အခေါက်များ လျှော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…..
မူလမျှဝေသူ – အေးနန္ဒာအောင်
Shared by TRIVA
Posted January 3, 2012 at 10:18 PM	ဟယ်…
တို့ အရမ်း လှလာတော့မှာပဲ…….။
အဟင့် ဒဂယ်ကြီးကို ဗိုက်တွေ ချပ်သွားတော့မှာတဲ့
Posted January 5, 2012 at 10:39 AM	ဒီဆေးနည်းကို တို့လိမ်းနေတာ နည်းနည်းတောင်ကြာပြီ.. တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးနည်းဖြစ်ပြီး ငွေကုန်သက်သာတယ်လေ.
ဗိုက်ခေါက်ထူတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆို သိသာတယ်ဆိုပြီး ညတိုင်းလိမ်းဖြစ်နေတယ်တဲ့.. အားလုံးတကယ်ကောင်းတဲ့ဆေးနည်းမို့ လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…..
Posted January 5, 2012 at 3:08 PM	comment လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ။ အဲလို သိရတော့ စမ်းကြည့်ဖို့ ပိုအားရှိသွားတယ် Reply	mon
Posted August 10, 2012 at 6:01 PM	အသက်ငါးဆယ်ကျော်အမျိုးသမီးများကောသုံးလို့ရမလားရှင်။ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါနော်။
Posted January 6, 2012 at 11:31 AM	တိုတခုသိချင်လို့ … ဒီမှာ အုံးဆီရှာမရလို့ … အခြားဆီ ဥပမာ သံလွင်ဆီတို့ဘာတို့ သုံးလို့ရလောက်လား … ဟင်
Posted January 6, 2012 at 12:00 PM	သံလွင်ဆီ သုံးလို့ ရနိုင်ပါတယ် ရှင့်။ ဆီကို ဆေးပူကြောင့် အေ၇ပြား မလောင်အောင် ထည့်သုံးတာမို့သံလွင်ဆီနဲ့ လည်း ရ နိုင်ပါတယ်။
Posted January 11, 2012 at 3:35 PM	ဆေးရဲ့တန်ပြန်ဆိုးကျိုးရော ရှိနိုင်လားဟင်။ ဆေးရဲ့ တန်ပြန်ဆိုးကျိုးမရှိရင်တော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေမဲ့ဆေးနည်းလေးပါပဲ။ အကုန်ကျလဲ သက်သာတယ်လေ။ ပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါရှင်
Posted January 11, 2012 at 10:49 PM	Can we use mustard oil instead of coconut oil??
Posted January 14, 2012 at 5:27 PM	Is it also useful for other areas like thigh and arms?
Posted January 28, 2012 at 4:21 PM	အုန်းဆီ မရှိဘူး သံလွင်ဆီ ဆိုတာ ဟို ဟင်းချက်တဲ့ olive oil ကို ပြောတာလား ဒါမှမဟုတ် ဆလူးမှာက ဟို johnson baby oil ဆိုတဲ့ ကလေးတွေ လိမ်းတဲ့ လိုးရှင်းအဆီ ရှိတယ် အဲဒါနဲ့ ရော ဖြစ်လား … ဆလူးလဲ အဲဒါ လိုက်လုပ်ချင်တယ် …. အဲဒါ လက်မောင်းသား တို့ ပေါင်တို့ကိုရော လိမ်းလို့ ရလား ဟင် ဖြေပေးပါဦး
Posted January 28, 2012 at 8:38 PM	ဟင် အခုနက မန့်ထားတဲ့ ကွန်မန့် ဘယ်ပျောက်သွားတာလဲ
Posted April 23, 2012 at 11:42 PM	မမတင်သမျှအားလုံးကြိုက်ပါတယ်။မီချီကဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာလုပ်တာပါ။အဲဒါကြောင့်ဆံပင်ဆညဖြာင့်၊ကောက်၊ဆေးဆိုးခြင်းနှင်ပတ်သတ်တာလေးတွေလဲသိချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်သားကြီးအောင်ဘာဆေးသောက်ရမယ်ဘာဆေးလိမ်းရမယ်ဆိုတာလဲသိချင်ပါတယ်။အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted July 25, 2012 at 4:31 PM	အမရေ ဗိုက်ခွဲထားတဲ့ သူများကောလိမ်းလို့ရလားသိချင်ပါတယ်။ အကြောင်းပြန်ပေးပါနော်။ အီးမေးလိပ်စာပေးခဲ့မယ်နော်
Posted July 27, 2012 at 9:51 PM	ညီမလေး သီသီရေ
ရွှေဗျူးတီးကို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ။
ဗိုက်ခွဲထားသူများ အနာကျက်ပြီဆို လူးလို့ ရပါတယ်။ လေ့ ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်၊ လူးလည်း လူးဆို ပို ထိေ၇ာက်ပါတယ်။
သိပ်အပူကြီးမလူးမိအောင်တော့ သတိထားပါနော်။ အသားကို လောင်တတ်လို့ ပါ။
Related Posts	Beauty ၇ ရက်အတွင်း ၁၀ ပေါင်ချမယ် (Diet Plan : Lose 10 lbs in7days)မျက်တောင်ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက် မလဲ? Basic Eyeshadow ♥2(Suitable for Doublelids)Basic Eyeshadow ♥ 1 (Suitable for Monolids)ဘွဲ့ အခမ်းအနားအတွက် ဆံပင်ပုံစံHealthGlucosamine: Joint Supplement	Recent Posts